Ahoana ny fanovana ny fiteny amin'ny Android | Androidsis
Miverina miaraka amin'ny fampianarana Android fototra, amin'ity tranga ity ary na dia ho an'ny ankamaroanareo aza dia toa zavatra ihomehezana izany noho ny fahamoranany, miaraka amina tutorial video ny fomba fanovana fiteny ho android.
Isan'andro aho dia mahazo fanontaniana, fanontanian'ny mpamaky sy mpijery Androidsis sy Androidsisvideo, izay anontaniana ahy zavatra tsotra toa an'io mba hanovana ny fitenin'ny terminal Android-anay, zavatra tena ilaina ho anay izay efa niasa tamin'ny Android rafitra fa izany dia mety ho toa tontolo iray manontolo ho an'ireo vaovao. Ka ho an'ireo mpampiasa rehetra eto dia mandeha amin'ny fampianarana ho avy Ahoana ny fanovana ny fiteny amin'ny terminal Android antsika nefa tsy mila manao famerenana amin'ny laoniny intsony.
Raha ny faniriantsika hanova ny fitenin'ny Android-tsika satria vao nomena antsika ary efa voalamina mialoha amin'ny fiteny tsy antsika izy io, ny tokony hataontsika fa tsy ny manaraka ity fampianarana Android azo ampiharina ity dia ny miditra ny safidin'ny Android, izany hoe ao amin'ny Fikirana Android ary mankanesa any amin'ny safidin'ny Backup, mifidy safidy Miverina ny data ary manamafy ny famafana ny atiny rehetra amin'ny terminal Android anay.
Rehefa manao an'ity firafitry ny ozinina feno ity, ankoatr'izay fafao ny atiny rehetra an'ny Android ary avelao izy rehefa nandao ny ozinina, izahay koa dia miantoka fa ny terminal dia madio amin'ireo rindranasa tsy ilaina napetrak'ireo tompon'ilay terminal teo aloha.
Miaraka amin'izany rehefa manomboka indray ny Android, dia handao antsika izy amin'ny voalohany safidio ny fiteny tianay ho fampiasa default amin'ny Android.
Raha izay no tadiavinao dia ovay ny fiteny izay nofidinao ho default ho an'ny Android tsy mila ado intsony, avy eo dia tsy maintsy manaraka ny dingana avelako ianao ao amin'ny lesona video navelako anao teo am-piandohan'ny lahatsoratra.
Tutorial izay asehoko anao aiza ny fanovana hanovana ny fiteny Android tsy mila manao famerenana amin'ny laoniny na hamafa izay efa tahirintsika amin'ny Android.
Ny fanovana hanovana ny fiteny Android raha tsy mila manao famerenana amin'ny laoniny dia ao amin'ilay lalana: Fikirana / Fiteny sy fampidirana lahatsoratra / Fiteny. Raha amin'ny teny Anglisy ny terminal anao, dia toy izao ny làlana: Fikirana / fiteny / fampidirana / fiteny.
Raha amin'ny fiteny hafa takatry ny saina, Sinoa, Hindi na fiteny mitovitovy aminy dia tsara kokoa ny mitady ny tandindon'ity fizarana Android ity, mazàna dia voamarika amin'ny litera A na amin'ny tontolon'izao tontolo izao misy tsipika mifanila aminy. Tsindrio io safidy io ary safidio ny safidy voalohany aseho. Ao anatiny ao dia afaka manova ny fiteninao amin'ny Android ianao ary mametraka azy amin'ny fiteninao na amin'ny fiteny tadiavinao.
Amin'ity tsotra ity dia efa tratranao ovay ny fiteninao Android nefa aza manamboatra famerenana amin'ny laoniny, na dia tadidio fa raha ny fanovana ny fiteny no tadiavinao satria ianao vao nividy Android faharoa na Android vaovao izay efa namboarina tamin'ny fiteny hafa dia matetika io no mitranga matetika amin'ny faran'ny marika sinoa, dia ny tsara indrindra zavatra dia hanao famerenanana orinasa mba hahazoana antoka fa madio amin'ny fampiharana tsy ilaina sy rakitra tsy ilaina ny Android anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fanovana ny fitenin'ny Android anao
Honor 8 Pro, sainam-pirenena amin'ny vidin'ny knockdown